‘टाटुवाला फोटो मैंले लिक गरेको होइन्’ : साम्राज्ञी « Ramailo छ
‘टाटुवाला फोटो मैंले लिक गरेको होइन्’ : साम्राज्ञी
सामाजिक सञ्जालमा नायिका साम्राज्ञी राज्य शाहको एउटा तस्बिर ‘भाइरल’ भैरहेको छ । साम्राज्ञीले दायाँतर्फको वक्षस्थल मुनि टाटु खोपाएको तस्बिर एकाएक भाइरल भएको हो । साम्राज्ञीको यो फोटो कसरी लिक भयो त ?
‘यो फोटो मैंले सार्वजनिक गरेको होइन’, फिल्म ‘कायरा’ छायाँकनको लागि फिलिपिन्समा रहेकी साम्राज्ञीले भनिन्, ‘हो मैंले टाटु खोपाएको हो तर म आफैंले चाहिं फोटो सार्वजनिक गरेको होइन् ।’ कसरी भयो त त्यस प्रकारको फोटो सार्वजनिक ? ‘टाटु आर्टिस्टले टाटु मात्रै खिचेर आफ्नो पेजमा राख्छु भन्नु भएको थियो । तर उहाँले फेस सहित राख्नु भएछ । मैंले चाहिं कहीं कतै पोस्ट गरेको छैन्’, साम्राज्ञीले प्रष्ट्याइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको विभिन्न खाले प्रतिक्रियालाई लिएर के भन्नु हुन्छ ? म आफैंले त्यस्तो फोटो पोस्ट गरेको होइन् । यो भुलवश हुन गएको कुरा हो । यसैले फोटोलाई लिएर नराम्रो नमानी दिनु होला, साम्राज्ञी भन्छिन् ।